के गर्ने याैन इच्छा नहुँदा ? - ज्ञानविज्ञान
के गर्ने याैन इच्छा नहुँदा ?
आमा बनिसकेपछि महिलामा आफ्नो सौन्दर्यको विषयलाई लिएर हीनताबोध बढ्दै जाने, यौनमा अरुचि बढ्ने तथा यौन सम्पर्क र यौनिक सुखका विषयमा विश्वास घट्दै जानेजस्ता समस्या देखापर्छन् । यसले महिलाको पारिवारिक तथा यौन जीवनमा असर त पर्छ नै उनको पार्टनर वा श्रीमान्को हकमा समेत नकारात्मक असर पार्दै जान्छ र अन्ततः त्यसले पारिवारिक विखण्डनको अवस्थासमेत निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ, दाम्पत्य सम्बन्धको मुख्य कडीको रूपमा रहेको सहवास वा यौनिक सुखको विषयलाई सदाबहार बनाउन श्रीमान्–श्रीमतीबीच आपसी समझदारी हुनुपर्छ ।
दम्पतीबीच शारीरिक सम्पर्क बन्द भएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध पनि खटपट सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू धेरै छन् । जवानी छ“दै दम्पतीबीच सहवास नहुनु भनेको निश्चय पनि राम्रो होइन । सहवास नहुँदा मनमुटाव बढ्छ, अविश्वास पैदा हुन्छ र अन्तिममा दाम्पत्य जीवन नै टुंगिन बेर लाग्दैन । सहवासले दम्पतीमा एकअर्काप्रति विश्वास बढाउ“छ र सम्बन्धलाई बलियो र दिगो बनाउँछ ।
महिला वा पुरुषमा उत्पन्न हुने सहवास प्रतिको अरुचिले सम्बन्धमा खटपट ल्याउने खतरा हुन्छ । महिलाहरू गर्भवती भइसकेपछि आफ्नो पार्टनरलाई आफूले यौन सन्तुष्टि दिन नसक्ने र पार्टनरको मन बिच्किन सक्ने भन्दै निकै चिन्तामा हुन्छन् । यो तनाव र चिन्ताले उनीहरूलाई यौन सम्पर्कका लागि झनै असमर्थ बनाउँछ । त्यसैले यस्तो तनावबाट मुक्त हुनु सफल यौन जीवनको एक महत्वपूर्ण विषय हो, जसबाट गर्भावस्थामा समेत महिलामा सहवासका लागि समता वृद्धि हुन्छ र पुरुष पार्टनरको यौन सन्तुष्टिमा प्राप्त गर्छन् ।
बच्चाको जन्म भइसकेपछि श्रीमान्–श्रीमतीको यौन सुखमा केही असर पर्न सक्छ । श्रीमती बच्चाको हेरचाहमा व्यस्त तथा थकित बन्नुपर्ने र पुरुषसमेत घरव्यवहारमा बढी सामेल हुनुपर्ने भएकाले यौनिक सन्तुष्टिको विषय प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । तर, यस्तो अवस्थामा समेत दम्पतीहरूले आफ्नो यौनजीवनमा ऊर्जा भर्न सक्छन् । त्यसको लागि केही समय बच्चाबच्चीलाई अभिभावक, केयर सेन्टर वा आफ्ना साथीहरूकोमा पठाएर दुईजना मात्रै कुनै नयाँ ठाउ“मा घुम्न निस्कने वा बचेको समयलाई यौनिक सुखका लागि भरपूर उपयोग गर्नु हितकर हुन्छ ।
महिलाहरू आमा बनिसकेपछि यौनिक सुखका विषयमा आत्मविश्वास गुमाउ“दै जानेमात्र होइन, आफ्ना पतिप्रति पनि बढी नै शंकालु बन्ने गर्छन् । पुरुषहरू पनि श्रीमतीलाई घरधन्दा सबै सुम्पिएर एक्लै रमाउने प्रवृत्ति बढाउँछन् र उनीहरूले श्रीमतीले आफूलाई समय नै नदिएको भनी गनगनसमेत सुरु गर्छन् । यस्तो अवस्थामा दम्पतीबीच मनमुटाव सुरु हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले बच्चाको हेरचाह र घरधन्दाको काम एक्लैले नगरी आफ्नो श्रीमान्लाई समेत त्यसमा लगाउने र बाँडीचुँडी घरधन्दा गर्ने गरेमा प्रभावकारी बुझाइको विकास हुनेमात्र होइन, समयको बचत हुने र बचेको समयलाई दम्पतीले चाहे अनुसारको काममा लगाउन सक्छन् ।
Topics #इच्छा #याैन
Don't Miss it किन चुम्बन गर्न मन लाग्छ सहवासको बेला ?
Up Next यी बेलामा भुलेर पनि केरा खान हुदैन, ज्यान नै जाने हुन सक्छ – जानी राखौँ
राती अबेर खाना नाखानुस, यस्ता रोग लग्न सक्छ
१. राती अबेर खाना खाएर तुरुन्त सुत्दा खाना बोसोमा बदलिन्छ । यसले मोटोपनको समस्या हुन्छ । २. राती अबेर खाना…
भान्सामा औषधी नै औषधी
हाम्रो भान्सामा यति धेरै औसधि हुन्छन जुन कुरा हामी मध्ये कतिपय लाई थाहा नहुन सक्छ । आउनुहोस आज हामी पढौ…
रिंकल पर्नबाट बचाउने यस्ता फलफुल
खरबुजा खरबुजाले छालालाई चिसो र नरम मात्र बनाउँदैन यसमा हुने भिटामिन सी र एले अनुहारको छाला बुढो देखिनबाट बचाउँछ ।…
स्मरणशक्ति कम हुने कारण हाम्रो खानपिनले गर्दा पनि रहेछ, स्मरणशक्ति बढाउने घरेलु उपाय
कुनै कुरा लामो समयको लागि मानसपटलमा राख्नु परेमा सबैभन्दा पहिले त्यसलाई दीर्घकालीन स्मृतिमा राख्न जरुरी छ । जबरजस्ती सम्झन खोज्दा…
यस्ता छन्, काँचो केराका फाइदा
काँचो केरामा पाइने फाइबर र अन्य केही पोषक तत्वले भोक नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । काँचो केरा खानाले समयमा भोक…
यस्ता छन्, घुर्ने समस्याबाट बच्ने केहि उपायहरु
पुदिनाको तेल पुदिनामा धेरै महत्वपूर्ण तत्व हुन्छन् । जसले हाम्रो नाकका छिद्रहरूलाई क्रियाशील बनाउन सहयोग गर्छन् । पुदिनाको तेल तातो…
वालवालिकाहरुका लागि ख्याल गर्नुपर्ने टिप्स, यस्ता छन्
१. बच्चाले भेटने ठाउँमा चुकुल राख्नुस् वालवालिकाको मस्तिष्कमा एकदमै सानो कुराले प्रभाव पार्छ । छोरीहरु आठ नौ वर्षपछि नुहाउँदा छातीमा रुमाल…
यस्ता छन्, जाडोमा खानुपर्ने गरम मसला
सुकेको अदुवा खानासँग सुकेको अदुवा प्रयोग गर्दा मुटुरोग, गाँठो पर्ने, पाचन समस्या, कब्जियत, छेरपटी र खोकी जस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ…